दलीय स्वार्थले रोकियो शिक्षण अस्पताल निर्देशक नियुक्ति – Health Post Nepal
दलीय स्वार्थले रोकियो शिक्षण अस्पताल निर्देशक नियुक्ति
२०७५ भदौ ९ गते ४:०१
स्वास्थ्य र शिक्षण संस्थामा हुने नियुक्ति दलीय भागभण्डामा नभई योग्यता, क्षमताका आधार हुनुपर्ने भन्दै अनशन र अभियान सुरु भएको झन्डै दशक बितिसक्दा पनि शिक्षण अस्पतालको निर्देशक नियुक्ति राजनीतिक भागभण्डाकै चपेटामा परेको छ ।
रिक्त निर्देशकमा सिफारिसका लागि गठन भएको समितिमा क–कसको नाम सिफारिस गर्ने भन्नेमा कुरा नमिलेपछि प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । त्रिवि विनियमावलीअनुसार आइओएमका डिनको संयोजकत्वमा गठित सर्च कमिटीले गरेको तीनजनाको सिफारिसमध्येबाट कार्यकारी परिषद्ले एकजनालाई निर्देशकमा नियुक्त गर्छ ।
समितिले नाम सिफारिस गर्न नसकेको भन्दै ६ भदौमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई पत्र पठाएको छ । संयोजक डा. अग्रवालले नाम सिफारिसका विषयमा सदस्यबीच सहमति हुन नसकेपछि सोको जानकारी उपकुलपतिलाई गराएको बताए । उनले सहमति हुन नसक्नुको कारण भने खुलाएनन् ।
त्रिविले ८ जेठमा डिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको संयोजकत्वमा डा. जीवन शेरचन र डा. रमेश सिंह सदस्य रहेको समिति बनाएको थियो । समिति बनाउँदा नै प्रमुख दुई दल नेकपा र कांग्रेसनिकट व्यक्तिलाई सदस्यमा राखिएको थियो । समितिले वरिष्ठता, अनुभव, संस्था हाँक्ने दृष्टिकोणजस्ता विषयलाई हेरेर दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।
सो आधारमा कसलाई माथि पार्ने भन्नेमै मुख्य खेल सुरु भएको थियो । समितिसमक्ष यसअघिका डेपुटी निर्देशक भइसकेका डा. ईश्वर लोहनी, डा. दिनेश काफ्लेसहित वरिष्ठ चिकित्सकहरू डा. वाइपी सिंह, प्रदीप वैद्य र डा. दिनेश पोखरेलले समेत दरखास्त हालेका थिए ।
तीमध्ये अस्पतालबारे राम्रो बुझेका अस्पतालका १० भन्दा बढी कमिटीमा संयोजक रहिसकेका डा. लोहनीलाई अधिकांश प्राध्यापकको समर्थन छ । कुनै पदमा नहुँदा पनि शिक्षण अस्पतालमा आइपर्ने जुसुकै समस्या सल्टाउन नेतृत्व र अग्रसरता दिने लोहनीको छवि छ । प्रतिस्पर्धामा रहेका बाहेक सबै वरिष्ठ चिकित्सक लोहनीकै पक्षमा छन् । उनी राजनीतिक रूपमा पनि तटस्थ मानिन्छन् ।
डा. भगवान कोइराला निर्देशक रहँदा डेपुटी भएर काम गरेका लोहनी सबैभन्दा निर्विवाद उम्मेदवार हुन् । त्यसैगरी, गत कार्यकालमा डेपुटी निर्देशक बनेका काफ्ले पनि कामका आधारमा सफल नै मानिन्छन् । काफ्ले पनि संस्थाको हितकै पक्षमा भए पनि कार्यावधि धेरै वर्ष बाँकी रहेकाले एक कार्यकाल पर्खिन उनलाई अधिकांश चिकित्सकको सुझाब छ ।
तर, पाँचौँ नम्बरमा रहेका उनै डा. काफ्लेको नाम जसरी पनि सिफारिस गर्नुपर्ने डा. शेरचनको अडान रहँदै आएको छ । बाहिर डा. केसीले डा. सिंहको नाम सिफारिस गर्न दबाब दिएको हल्ला चलाए पनि राजनीतिक रूपमा भने डा. काफ्लेकै नाममा विवाद हो ।
सुरुमा काफ्लेको नाम ३ नम्बरमा पठाउन समितिका सदस्यहरू सकारात्मक देखिएका थिए । तर, काफ्लेको नाम सिफरिस भए उसैलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको त्रिवि पदाधिकारीहरूले बताए । त्यसको सुइँको पाएपछि यसबीचमा डा. गोविन्द केसीले वरिष्ठतालाई नाघेर सिफारिस नगर्न सचेत गराएपछि समितिभित्रै डा. काफ्लेको नाम विवादमा आएको थियो ।
नेकपानिकट चिकित्सकको समर्थन रहेका काफ्लेको नाम कुनै पनि हालतमा सिफारिस गर्नुपर्ने अडान सर्च कमिटीका डा. शेरचनले छाडेका छैनन् । उनले सुरुदेखि नै ‘अरू मतलब छैन, काफ्लेको नाम जानुपर्छ’ भन्दै आएका छन् । त्यसैगरी, अर्का सदस्य सिंह डा. लोहनीको नाम १ नम्बरमा सिफारिस हुनुपर्ने अडानमा छन् । डा. अग्रवाल वरिष्ठतम तीनजनाको नाम पठाउने पक्षमा थिए । जसमा डा. लोहनी, सिंह र वैद्यका नाम पर्थे ।
उपकुलपति तीर्थ खनियाँले ‘प्रधानमन्त्रीले काफ्लेको नाम सिफारिस भएर आए उसैलाई निर्देशक बनाइदिनू’ भन्ने निर्देशन दिएको बताउँदै आएका छन् । सो आधारमा खनियाँले काफ्लेको नाम आए आफूले कुलपतिको निर्देशन अवज्ञा गर्न नसक्ने संकेत गरेका छन् । ‘सर्च कमिटीमा डा. काफ्लेको सिफारिस जति नम्बरमा भए पनि हुनुपर्छ भन्ने अडान छ भने माथि पनि उनको नाम आए गर्नुपर्छ भन्ने दबाब छ,’ त्रिवि स्रोतले भन्यो, ‘यो स्पष्ट रूपमा दलीय हस्तक्षेप हो ।’
डा. केसीले २०६७ मा पहिलोपटक अनशन थाल्दा आइओएममा पदाधिकारी दलीय भागभण्डाका आधारमा नभई वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । यसबीचमा वरिष्ठता मिचेर बनेका दुई डिनविरुद्ध डा. केसीले अनशन गरेपछि सरकारले हटाएको थियो ।